प्रविधि सम्बन्धि कुराहरुको अध्ययन अनुसन्धान नै मेरो रुची हो-अशेष श्रेष्ठ - MeroReport
प्रविधि सम्बन्धि कुराहरुको अध्ययन अनुसन्धान नै मेरो रुची हो-अशेष श्रेष्ठ
गत फेब्रुअरी २०१३ मा सुरथ गिरीले एउटा ब्लग लेखेका थिए नेपालका सर्वाधिक चर्चित टपटेन ब्लगहरु भनेर । उनको लेखमा उल्लेख भएको टपटेनको क्रमबद्द सुचीलाई आधिकारिक मान्ने हो भने माईसंसार र एक्सनेपालीपछि टप तेश्रो ब्लगमा पर्छ अशेषको ब्लग अर्थात http://www.ashesh.com.np/। पेशाले वेव डेभ्लपर र घर तनहुँ जिल्लाको दुलेगौँडा-७ मा पर्छ अशेष श्रेष्ठको । आफूलाई फ्रिलान्सर वेव डेभ्लपर भन्न रुचाउने अशेष केही समयअघि पढाईको लागि बाहिर गएका भएपनि अहिले नेपालमै बसेर काम गर्दैछन् । सुचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर उनको बिशेषता भनेको हामीलाई दैनिक जीवनमा काम लागिरहने वेब एप्लिकेशनको निर्माण गर्नु पनि हो । नेपाली क्यालेन्डर होस् या डेट कन्भर्टर या नेपाली यूनिकोड नै किन नहोस् उनले त्यस्ता थुप्रै एप्लिकेशनको निर्माण पनि गरेका छन् । अशेषको ब्लग नेपाली वेवसाईटमाझ १९३ औँ र पुरा विश्वभरमा ३३३,३१६ औँ नम्बरमा समेत रहेको उनी टप थ्रीमा रहँदा उल्लेख गरिएको तथ्याङ्कमा समेत लेखिएको छ । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा हामीले यसपाली उनै अशेष श्रेष्ठलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसंगको कुराकानी :
तपाइ त विशुद्द एउटा वेब डेभ्लपर, सोसल मिडियामा आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ, ब्लगरका रुपमा या अरु केही?
म आफूलाई ब्लगर र वेब डेभ्लपरकै रुपमा चिनाउन चाहन्छु ।
तपाँइको ब्लग http://www.ashesh.com.np/ मात्रै कि अरु पनि छन?
मैले ब्लगिङ www.ashesh.com.np बाट नै सुरु गरेको हुँ तर अहिले ३० भन्दा धेरै वेवसाईटहरुमा पनि अतिथिका रुपमा ब्लगहरु पोष्ट गरिरहन्छु । फेरी अहिले www.appslova.com भन्ने ब्लग सुरु गरेको छु । यो खासगरी एण्ड्रोईड मोवाईल चलाउनेहरुका लागि हो । खासमा यो application सम्बन्धि ब्लग हो ।
रुचीको बिषयका बारेमा भन्नुपर्दा प्रविधि सम्बन्धि कुराहरुको अध्ययन अनुसन्धान नै मेरो रुची हो ।
आफ्नो ब्लगको बारेमा थोरै शब्दचित्र प्रस्तुत गरिदिनुस् न ?
पूर्णरुपमा टेक्नोब्लग ।
मैले सन् २००६ को मध्यतिरबाट ब्लगिङ सुरु गरेको हुँ ।
सुचनाहरु आदान प्रदान गर्नका लागि नै हो मैले ब्लगिङ सुरु गरेको ।
ब्लगमा खासगरी कस्ता कुराहरू लेख्नु रुचाउनुहुन्छ?
खासगरी प्रविधि सम्बन्धि कुराहरु नै राख्न रुचाउँछु म मेरो ब्लगमा ।
आफ्नो ब्लगमा सुचना प्रविधिका कुराहरु धेरै लेख्ने गरेपनि अरु सोसल नेटवर्किङ साइटहरुमा तपाइ कस्ता बिषयमा बहस गर्न रुचाउनुहुन्छ?
त्यही नै हो Tech सम्बन्धी कुराहरु । बिश्वमा भित्रिएका प्रविधि तथा नेपाल र नेपाली प्रविधिका कुराहरु सबै बारेमा लेख्न, पोष्ट गर्न रुचाउँछु ।
यहाँको ट्विटरको बायो अनुसार अहिले यहाँ लण्डनमा बस्नुहुन्छ, नेपाली ब्लगिङ र सोसल मिडियाको क्षेत्रलाइ कसरी नियाल्नुभएको छ?
अध्ययनका लागि लण्डनमा थिएँ तर अहिले नेपाल फर्किईसकेको छु । म अहिले तनहुँस्थित घरमै छु । रह्यो कुरा नेपालको ब्लगिङ र सोसल मिडियाको अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि ब्लग तथा सोसल मिडिया मार्फत सुचना आदान प्रदानकै काम भइरहेको छ जसका कारण नै सोसल मिडिया शशक्त भईरहेको छ ।
सन २००६ तिरको कुरा हो, ब्लगिङ सुरु गर्दाताका मलाई वेवसाईट वा सुचना प्रविधिको बारेमा खासै राम्रो जानकारी थिएन । आफै अनुमान लगाउँदै बस्थेँ । साथीहरुसंग कुरा गर्दा हामीले लेखेको आर्टिकल वा ईमेल कहाँ गएर बस्छ भनेर सोधे भने मैले आकाशको हावामा बस्छ होला भन्ठान्थेँ । अहिले सम्झिन्छु-रमाईलो लाग्छ ।
मानिसहरु अचेल सामाजिक संजालमा हुने बहसमा निकै सहभागी भैरहेका हुन्छन, किन यसरी भर्चुअल संचारमा मानिसहरु रमाउँदैछन् होला?
मेरो बिचारमा सामाजिक संजाल जस्तो सस्तो, सजिलो या सुलभ प्लेटफर्म अरु कमै होलान् । त्यसैले सुचना आदानप्रदानका निम्ति यो सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुनाले नै होला ।
मलाई लाग्छ-यहाँ छोटो समयमा धेरै भन्दा धेरै ज्ञान लिन सकिन्छ ।
यो नै त भनेर अहिले थाहा पाउन सकिन तर धेरै हेरिएकाहरु मध्येको कुरा गर्नुपर्दा www.appslova.com का Android ﬁx का पोष्टहरु अनि वेब एप्लिकेशनहरुमा चाँही www.nepali-calendar.com, www.ashesh.com.np/nepali-calendar/, www.ashesh.com.np/nepali-unicode.php, www.ashesh.com.np/nepali-date-converter.php, www.ashesh.com.np/nepali-time.php, यीनै हुन जस्तो लाग्छ ।
ब्लग बनाएर वा लेखेर मात्रै भएन, त्यसले पाठक अथवा भिजिटरको ध्यान तान्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । कस्ता ब्लगले पाठकको ध्यान धेरै तान्छ होला?
समस्या समाधानमुखी ब्लगपोष्टहरुले धेरै भिजिटर बढाउँछ ।
नेपाल लक्षित टेक्नोब्लगहरु अत्यन्तै न्युन भेटिन्छन किन यस्तो होला प्रविधि प्रति मान्छेको बुझाइ कम भएर या यस्तो ब्लग लेख्नेहरु नै कम भएर?
पहिलो कुरा त ईन्टरनेटको बिस्तार भने अनुसार नभएर ईन्टरनेट चाहिने सबैखाले कम्युनिकेशनमा आम उपभोक्ताको पहुँच नहुनाले होला अनि अर्को चाँही Tech Product कम मात्रामा प्रयोग हुनाले पनि होला ।
तपाँईको ब्लगको मुख्य भिजिटरहरु को हुन्?
Web Application का लागि नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरु र ब्लगका लागि प्रविधि सम्बन्धि समस्यामा परेकाहरु नै हुन् ।
हेर्छु, cnet, The next web, 9to5mac, MacRumors लगायतका ।
सामाजिक संजालको खास महत्व के?
सस्तो र सुलभ रुपमा सुचनाको आदानप्रदान नै यसको सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो जुन एकदमै महत्वपुर्ण पनि छ ।
तपाइको विचारमा सामाजिक संजाल के हो?
सुचना र समाचार आदानप्रदान गर्ने थलो, बिचारहरु अभिब्यक्त मञ्च र विज्ञापनको माध्यम यी तिनवटै कुराहरुको संगम नै सामाजिक संजाल हो ।
नागरिक पत्रकारिताको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता (Code of Conduct) पनि चाहिन्छ भन्ने बहस पनि छ एकातिर, तपाइलाइ के लाग्छ, के यो जरूरी छ?
प्रयोगकर्ताहरुको गोप्यता र सुरक्षा (privacy & security of Users) का लागि पनि जरुरी छ ।
आफूले जानेका केही कुराहरु यसरी अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद । राम्रो नेपालका निम्ति आआफ्नो क्षेत्रबाट सबैले पहल थालौँ । धन्यवाद ।